ट्रम्पका एकजना सहयोगीले उनलाई छोडे::Hamrodamak.com
ट्रम्पका एकजना सहयोगीले उनलाई छोडे
एजेन्सी | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका एकजना सहयोगीले आफ्नो पदवाट राजिनामा दिने बुधबार घोषणा गरेका छन् ।
पूर्व मोडल समेत रहेकी राष्ट्रपति ट्रम्पका सञ्चार निर्देशक होप हिक्सले राजीनामा दिने घोषणा गरेको बताइएको छ ।
हिक्सले ट्रम्पसँग अमेरिकी राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै कामगर्दै आएका थिए । उनि राष्ट्रपति ट्रम्पका लामो समय काम गर्ने सहयोगीमध्येका एकजना हुन् ।
गत सेप्टेम्बर महिनाबाट २९ बर्षीया हिक्स ह्वाइट हाउसमा सञ्चार निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्पले हिक्स साँच्चिकै असल व्यक्ति भएको टिप्पणीगर्दै उनको अभाव खट्किने बताएका छन् ।
हिक्सले आफूले राजिनामा दिने भनेर प्रकाशन गरेको एक विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई घन्यवाद दिने कुनै शब्द नभएको बताएका छन् ।
हिक्सले राजिनामा दिने घोषणा गरेको भए पनि कहिलेबाट लागू हुनेहो भन्ने बारेमा भने प्रष्ट नभएको ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले बताएका छन् ।
उनका अनुसार सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा रुसले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपमा आफूले झुटो नबोलेको बताएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुले बताएका छन् ।
सन् २०१६ मा अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमाका समयमा हिक्सले ट्रम्पको प्रेस सचिवका रुपमा काम गरेको बताइएको छ ।
सन् २०१७ को जनवरीमा ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि उनको नियुक्त गरेको सहयोगी तथा सल्लाहकारमध्ये पदबाट राजीनामा दिने उनि तेस्रो व्यक्ति रहेका छन् ।
बिहि, फाल्गुन १७, २०७४ मा प्रकाशित
अन्तर्राष्ट्रिय खबर बाट अन्य
काठमांडौ । युएईलाई तेश्रो टि-२० मा १४ रनले पराजित गर्दै नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जित्न सफल भएको छ। वर्षको कारण १० ओभरमा छोट्याईएको खेलमा नेपालले पहिले ब्याटिंग गर्दै १०४/८ को योगफल तयार...
बेलायत, ७ माघ । लिम्बुवान नागरिक समाज बेलायतको चौथो महाधिवेशनले छत्र वनेमलाई सर्वसम्मतले अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । वनेम यसअघि समाजका महासचिव थिए । शनिबार आसफोर्डमा भएको महाधिवेशनले वनेमको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय कार्य समिति चयन...
एजेन्सी | भारतको उत्तर प्रदेशका एक व्यक्तिले आफ्नो लिङ्ग काटेका छन् । उनले आफ्नी श्रीमतीको झोँकमा आफ्नो लिङ्ग काटेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार श्रीमतीले सम्भोग गर्न नदिएपछि घाँसी राम नाम गरेका ब्यक्तिले रिसको...
फ्रान्स । इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा फ्रान्समा भएको प्रदर्शनमा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा झन्डै तीन लाख मानिस सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच...
श्रीलंका। संसद भवनभित्रै सदन चलिरहेको बेला सांसदहरुबीच हात हालाहाल भएको छ। बिहीबार दिउँसो बसेको संसद बैठकमा सरकार पक्षधर र विरोधी दलका सांसदहरुबीच कुटाकुट भएको हो। राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका महिन्दा राजपक्षले आफूलाई ध्वनीमतबाट...
संसदबाट प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित !
कोलम्बो । श्रीलङ्काको पुनर्स्थापित संसदले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्ष विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको छ। मंगलबार श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले विघटन गरेको संसदलाई पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएलगत्तै संसदले सिरिसेना नियुक्त राजापाक्षलाई अश्विकार...
एमनेस्टीले फिर्ता लियो सुकीलाई दिएको सर्बोच्च सम्मान !
काठमाडौं । मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सँस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकीलाई दिएको सर्वोच्च सम्मान फिर्ता लिएको छ। सुकीको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता र व्यवहारप्रति विश्वव्यापी रुपमा प्रश्न उठेपछि उक्त सम्मान फिर्ता लिइएको हो। सन्...
पाईलटले नै मापसे गरेर प्लेन उडाउन लागेपछि…
भारत। भारतको राष्ट्रिय ध्वजावाहक बिमान कम्पनि एयर इन्डियाका एक सिनियर क्याप्टेनले मापसे गरेर प्लेनउदाएको पाईएपछि तीन वर्षको लागि कमर्सियल जेट उडाउन नसक्नेगरि ग्राउण्डेड हुने भएका छन् ।सिनियर पाईलट अरभिन्द कठपालीया मापसे चेकिङका क्रममा यस्तो...
गोली हानाहान हुँदा सुरक्षाकर्मीसहित १५ जनाको मृत्यु !
अफगानिस्तान। अफगानिस्तानमा शुक्रबार भएको गोली हानाहानको घटनामा परी १५ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका मध्ये तीन जना सुरक्षाकर्मी र अरु १२ जना लडाकू रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । घटना अफगानिस्तानको बड्घीस प्रान्तको क्याडिस...
राष्ट्रपतिद्वारा एक्कासी संसद भंग,नयाँ चुनावको घोषणा !
एजेन्सी । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले संसद भंग गरेका छन् ।संसद भंग गरेर उनले जनवरी ५ मा देशमा आमचुनाव गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्षेसँग संसदमा पर्याप्त समर्थन थिएन । २६ अक्टोबरको नाटकीय...